Main zvinhu ramangwana kukura simbi upfu jekiseni Kuumbwa - China Dongguan CFine Machinery
Simbi upfu simbi simbi jekiseni kuumbwa (MIM) tekinoroji chigadzirwa chemhando dzakawanda, senge plastiki yekuumba tekinoroji, polymer chemistry, poda simbi tekinoroji uye simbi zvinhu sainzi. Iyo inogona kukurumidza uye nekunyatso kugadzirisa iro dhizaini dhizaini mune imwe mhedzisiro nekushandisa chakuvhuvhu jekiseni kuumbwa isina chinhu uye nekukurumidza kugadzira yakakwira-kuwanda, yakakwira-chaiyo, matatu-mativi akaomarara akaumbika echimiro ezvakaumbwa zvikamu kuburikidza nesintering Icho shanduko nyowani mukugadzira tekinoroji indasitiri izvo zvigadzirwa ine hunhu uye hunhu hunogona kugadzirwa zvakananga mumabatch. Izvi zvinotevera naGuangdong Dahong nyowani zvinhu zvidiki zvakateedzana pasimbi upfu jekiseni kuumbwa mune ramangwana gwara rekuvandudza.
Parizvino, chiyero chesimbi yeupfu jekiseni kuumbwa kwevagadziri munyika ichiri chidiki, asi hachina kukanganiswa nedambudziko rezvehupfumi, asi zvakaramba zvichiwedzera. MuEurope, ayo makuru ekushandisa minda ndeye MIM mota zvikamu, zvakaita sehupfu simbi simbi giya uye hupfu simbi diki module giya. MuNorth America, inonyanya kutarisana neMIM zvigadzirwa zvekurapa, nepo muAsia, MIM smart wear inonyanya kushandiswa, yakadai seMIM smart wear bracelet uye MIM smart wearable electronic watch. Mune ramangwana, kuvandudzwa kwesimbi yeupfu jekiseni kuumbwa kunozotarisa pazvinhu uye dhizaini, uye shandisa zvakanakira MIM tekinoroji kubatsira vatengi kuvandudza dhizaini yezvigadzirwa uye kudzikisa mutengo, kuti iwedzere kushanda kwesimbi yesimbi yeupfu jekiseni kuumbwa.
Metal poda jekiseni kuumbwa (MIM) tekinoroji ine hunhu hwepamusoro kunyatsoita, yunifomu sangano, kugona kuita uye yakaderera kugadzirwa mutengo uchienzaniswa neyechinyakare maitiro. Zvigadzirwa zvaro zvinoshandiswa zvakanyanya muMIM nharembozha nhumbi, MIM akangwara kupfeka, MIM auto zvikamu, MIM zvedongo wachi kesi, MIM yekukurukurirana ekurapa, hofisi zvishandiso, michina, mitambo michina, wachi indasitiri, zvombo uye aerospace indasitiri. Naizvozvo, zvinowanzo davirwa kuti kuvandudzwa kwetekinoroji iyi kunozotungamira mukuchinja kwezvikamu zvinogadzira nekugadzira tekinoroji, inozivikanwa se "chikamu chinozivikanwa kwazvo kugadzira tekinoroji nhasi" uye "kugadzira tekinoroji muzana ramakumi maviri nerimwe".
* CAPTCHA: Tapota kusarudza Mukombe